Safarka Suudaan | Wararka Safarka
Mariela Carril | | Afrika, Maxaa la arkaa
Suudaan waa waddan Afrikaan ah oo leh muuqaal qurux badan. Maahan meel dalxiis loo tago per seWaxay u badan tahay kuwa dalxiisayaasha ah iyo kuwa safarka ah cabsi la'aan, laakiin haddii aad ka mid tahay kooxdan shaki la'aan Suudaan ayaa kula tartami doonta.
Marka maanta waan arki doonaa Suudaan sida ay tahay iyo maxaan ku qaban karnaa, haddii aan heli karno fiisaha oo aan dhex marno.
Afrika waa qaarad hodan ah oo waligeed ay awood ku lahaayeen quwadaha reer Yurub. Dalalkani waxay hubeeyeen oo hub ka dhigis ku sameeyeen ummaddo, oo ay ku midoobeen xoog dadyowga cadowga ah qarniyo badan, waxay dhiirrigeliyeen dagaalladii sokeeye, afgembigii iyo liisas dheer oo masiibooyin aan si wanaagsan ugu dhammaan qaaradda guud ahaan.
Suudaan waa tusaale. Markii dalalkii gumeystuhu kala qaybiyeen Afrika waxay qaabeeyeen Suudaan iyagoo ku daray dadka muslimiinta ah ee waqooyiga ka yimid iyo kuwa ka soo jeeda koonfurta, in yar oo isku mid ah. Sidaa awgeed dagaal sokeeye wuxuu ahaa mid joogto ah muddo dheer, sidaa darteed sanadkii 2011 Koonfurta Suudaan waxay qaadatay xornimo. Colaadaha ayaa kasii socday galbeedka waxaana sanadkii lasoo dhaafay kaliya lasoo afjaray kalitalisnimo toban sano qaadatay.
Sida africa oo dhan Suudaan waxay leedahay muuqaallo kala jaad ah, laga bilaabo buuraha ilaa savannas, iyada oo loo marayo khudbadaha. Waxay kaloo leedahay muhiim kala duwanaanta dhaqanka waana in la xasuustaa inay tahay dhulkii boqortooyooyinkii hore. Maanta Waxaa loo qaybiyaa shan gobol: xarunta, Daarfuur, bariga, Kurdufan iyo waqooyiga.
Bartamaha Suudaan waxay isku uruurisaa awooda siyaasadeed, dhaqaale iyo dhaqan tan iyo halkan waa kan caasimada, Khartuum. Magaalada waa halka ay ku kulmaan Niilka buluuga ah iyo Niilka Cad. Waa magaalo ballaadhan oo ay ku midoobeen saddex magaalo oo ay kala qaybiyeen webiga Niil iyo labadiisa gacmood. Khartuum waa mid ka mid ah, xarunta dowladda, qaybteeda ugu da'da weynna waxay ku taal daanta webiga Niilka Cad, halka xaafadaha cusubi ku yaalliin koonfurta.
Si aad u booqato Suudaan waxaad u baahan tahay fiiso, markaa haa, waa inaad soo martaa qunsuliyadda ama safaaradda si aad uga shaqeyso. Haddii aad hesho oo aad ka soo gasho waddanka Khartuum laakiin aad qorsheyneyso inaad intaas ka sii sii dhaafto, waa inaad isdiiwaangelisaa oo aad ka baaraandegtaa oggolaansho gaar ah, isla marka aad timaadaba. Taasi waa, saddexda maalmood ee soo socota laga bilaabo imaatinkaaga waa inaad iska diiwaangelisaa booliska, waxaadna si toos ah uga sameyn kartaa garoonka diyaaradaha si aad uga takhalusto.
Si aad u ogaatid una booqato caasimada waa inaad isticmaashaa taksi, basaska yar yar ama tagaasida mootooyinka. Ma jiraan doonyo taksi oo isku xira magaalooyinka iyo xaafadaha ku teedsan wabiga, kaliya waxaa saaran doon isku xirta Khartoum iyo Jasiiradda Tuti, oo ku taal bartamaha Blue Nile. Socodku waa adag yahay maxaa yeelay waxaa jira seddex magaalo oo wadajira way weyn yihiin. Laakiin maxaad ku arki kartaa caasimada? Waad lugeyn kartaa Wadada Nile, oo ku taal daarta Niilka Buluugga ah, oo ay ku hareeraysan yihiin dhismayaal gumaysi, Matxafka Qaranka, geedo iyo dad badan oo wareegaya.
Sidoo kale waa inaad booqataa Madxafka Madaxtooyada Suudaan, jardiinooyinka Madaxtooyada, ee Beddelida Ilaalada, xaflad ka dhacda jimcaha ugu horeeya ee bil kasta, isku-xirnaanta labada Niil, oo loo yaqaan Al-Mogran, oo laga arki karo buundo bir ah oo sida ay yiraahdaan xitaa aad kala garan karto farqiga midabka labada u dhexeeya (haa, sawir ma leh maxaa yeelay yaa garanaya sababta loo mamnuucay), sidoo kale waxaa jira Beerta Qoyska Al-Mogran, suuqa Souq Carabi, weyn, ka Qabuuraha Dagaalkii Dawlada Dhexe, oo ay la socdaan 400 xabaal oo Ingiriis ah oo ku dhintay Ololihii Bariga Afrika ee 1940-41, in kasta oo ay sidoo kale jiraan qarnigii XNUMXaad.
In magaalada Omdurman sidoo kale waxaa jira suuq aad u weyn, Casa del Kalifa, hadda matxaf iyo Xaflada qoob ka ciyaarka Suufiyada, midab leh, aad ugu qalma in la sawiro. Horeba aagga woqooyi, Bahri, waxaad ku markhaati kici kartaa dhacdo dagaal, Nuba Fight, iyo Saad Gishra market. Haddii kale galabtii waxaad shaah ku cabi kartaa waddada Niilka, waxaa ku yaal guryo badan oo shaaha laga cabo iyo makhaayado ama maqaaxiyo. Ahaanshaha waddan muslimiin u badan qaadashada khamrigu way adagtahay markaa waxay u badan tahay inaad jogto joornaal inta aad joogto.
Hadda, sida xaqiiqada ah kama fikirin Suudaan oo kaliya inaad ogaato caasimadiisa. Runtu waxay tahay in ilbaxnimada halkan ka jirtay ay jirtay kumanaan sano oo ay ahayd dhul ay leeyihiin boqortooyooyin badan, oo ay ugu xoog weyneyd boqortooyadii Napata, oo ku soo noqotay qarnigii XNUMXaad ee dhalashadii Ciise Ka dib waxaa raacay boqortooyadii Merowe iyo boqortooyadii Nubia, Christian, qarnigii XNUMXaad ee miilaadiga iyo boqortooyooyinkii Islaamka. Hadhaaga boqortooyooyinkan ayaa wali muuqda maanta iyo waxaa jira goobo badan oo qadiim ah oo u dhexeeya waqooyiga iyo koonfurta dalka.
Aan aragno, inta udhaxeysa goobaha dalxiiska waxa Suudaan haysataa waa Sai, jasiirad ku taal koonfurta cataract-ka labaad oo leh macbudyo, taallooyin iyo qabuuro laga soo bilaabo xilligii dhagaxa hore iyo xilligii Fircooniga sidoo kale, illaa imaatinkii Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Sadinga Waxay xoojineysaa dhaxalka fircooniga in kastoo ay jiraan wax ka mid ah boqortooyooyinka Meroetic iyo Napatan. Soleb isku mid. Daaran Tumbus Qoraallada Masaarida ayaa laga helay dhagxaan u dhow isha saddexaad.
Mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee qadiimiga ah Suudaan waa Karma. Halkaan waxaa ku yaal dhismayaal aad u waaweyn wax walbana waxay soo socdeen qarnigii saddexaad ee dhalashadii Ciise ka hor. Tabo Waxay ku taal jasiiradda Argo, koonfurta cataract saddexaad, waxaana ku jira macbudka Kushite-ka iyo waxyaalaha qadiimiga ah ee laga soo bilaabo xilliyadii Meroetic iyo Christian. Kawa waxay la mid tahay muraayadda Masar ee dhismaha, sidoo kale waa Dongola, oo ah caasimaddii Boqortooyadii Nubia Christian, Mayuria, oo leh masaajid ahaan jiray kaniisad, qasriyo, qabuuro iyo guryo duug ah.
Caasimad diimeedkii Boqortooyada Naataata waxay ahayd Jebel Al - Barka waxayna kudhowdahay biya dhaca afraad. Halkan waxaa jira daaraha waaweyn, macbadyada, Ahraamta iyo qabuuraha xilliyadii kala duwanaa inta udhaxeysa xilliyadii Fircooniga, Nafaatan iyo Meroetik. Goobta Nuri waxaa ku jira Ahraamta iyo qabuuraha boqortooyada ee ka soo jeeda boqortooyadii Napatan. The Qabuuraha Al-Kuru Iyagu waa kuwo caan ah, oo leh dhagaxyadooda quruxda badan oo ay leeyihiin boqorradii ugu horreeyay ee Naataan.
Dhiniciisa waxaa goobta Al-Ghazali Waxay ku taal dhul-biyoodka Bayoudah oo dhawr kiiloomitir u jirta magaalada Merowe waxaana ku jira waxyaabo ka soo jeeda xilligii Masiixiyiinta. Merowe lafteeda waa caasimada boqortooyada Kush sidaas oo kale waxay leedahay Ahraamta, macbudyo iyo waxyaalo xusuus ah maadaama ay ahayd magaalo dhab ah. Meel qurux badan oo laga sawiro ayaa ah Jaalle Musawarat, aag ahaan jirtay xarun diimeed soo jireen ah ilaa xilligii Meroetic-ka waxaana ku qornaa macbadyo iyo dhisme nuurad weyn.
Si madaxbanaan loogu guuro Suudaan oo dhan ma sahlana mana garanayo haddii aan sidoo kale lagu talinayn. Waxa ugu fiican ayaa ah dalxi booqasho Maaddaama booqashada meelaha Afrika ee aan ku jirin khariidadda dalxiiska ay noqon karaan kuwo dhib badan oo keena dhibaatooyin ka badan xalka. Maxaa intaa ka badan, Suudaan malahan kaabayaal wanaagsan safarka madaxbanaan. Xitaa haddii aad kireysato safar, wakaaladda ayaa kuu maareyn doonta qaar ka mid ah isa-ga adiga, sameyso codsi ah in lagugu soo gaarsiiyo garoonka diyaaradaha, tusaale ahaan.
Un booqasho caadi ah Wuxuu bilaabmayaa Khartoum ka dibna sii wad safarka woqooyi, cidlada, xagga Old Dongola, kala badh inta udhaxeysa caasimada Suudaan iyo xadka Masar. Waa wadnaha Masiixiyadda Suudaan. Maaha wax aan caadi ahayn in meeshani madhan tahay, in kasta oo ay aad muhiim u tahay, markaa waa mid aad u badan. Socdaalku wuxuu sii soconayaa maalinta xigta ee Kush, Dhulka Nubia ee udhaxeeya biya-dhaca koowaad iyo afraad ee wabiga Nile.Xarunta dhexe ee boqortooyadii hore ee Kush halkan waxaa ku yaal burburka Kerma, oo ah goob aad u qurux badan oo qadiimi ah.
Safarka ayaa sii socda Tuulada Wawa inaad u hoydaan oo aad booqatid Macbadka Soleb waaberiga, adigoo lugeynaya qarka webiga Niil inta u dhexeysa geedaha timirta ah, qaadaya doon yar iyo wadada dhex marta beeraha lagu beeray sarreenka ilaa laga gaarayo macbadka halkaasoo qorraxdu ka marto tiirarkeeda. Macbudkan waxaa dhisay fircoonkii Aminotep III, isla kan aasaasay Macbadka Luxor, in kasta oo uu yahay mid aad u dhexdhexaad ah haddana wali waa qurux badan yahay oo waa ku dhowaa sixir.
Waxaa sidoo kale jira Ahraamyada Nuri, ayaa la booqday maalintii saddexaad ee socdaalka caadiga ah, oo ka mid ah dunes, oo la dhisay inta u dhaxaysa qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad ee BC, ugu da'da weyn Old Nubia. Waxaa la socda isla maalinta booqashada buurta barakaysan ee Jebel Barkal, oo leh aragtiyo cajaa'ib leh oo ku saabsan Niilka, Ahraamtiisa iyo macbudyadiisa.
Tan iyo sanadkii 2003 waa Dhaxalka Aduunka oo dhan xaq u. Ugu dambeyntiina, socdaalku wuu sii socdaa wuxuuna noo sheegayaa Ahraamyada Meroe, 200 qaabdhismeed cajiib ah oo ka badan 2500 sano, meel sixir ah, macbudka Musawarat waa Sufra oo dhagaxyadeeda loo xardhay sida xayawaanka iyo Naqa Temple oo lamadegaanka ku yaal.
Runtu waxay tahay maadaama Suudaan aysan aheyn dalxiis dalxiis waxaa jira suugaan yar oo ku saabsan dalka iyo khasnadihiisa, laakiin haddii aad tahay qof ku dhiirran oo aad jeceshahay inaad waxyar keli ku dhex noqotid burburka, oo aan diidin, ha ka waaban inaad qabanqaabiso safar aan caadi ahayn dalkan cajiibka ah ee taariikhiga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Afrika » Safarka Suudaan
Magaalooyinka ugu quruxda badan Faransiiska